» युरो कप २०२१ भविष्यवाणी गरि नगद एक लाख जित्नुहोस
युरो कप २०२१ भविष्यवाणी गरि नगद एक लाख जित्नुहोस
२०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार १२:३३
काठमाडौं । रोलिङ प्लान्स प्राइभेट लिमिटेडले यहि जुन १२ देखि आयोजना हुन लागेको युरो कप २०२१ लाई मध्यनजर गर्दै खेल भविष्यवाणी प्रतियोगिता आयोजना (गेम प्रेडिक्सन) गरी अधिकतम नगद एक लाख साथै अन्य आकर्षक पुरस्कार जित्न सक्ने नयाँ कार्यको थालनी गर्ने भएको छ ।
यसमा सहभागी हुन चाहाने व्यक्तिहरुले कम्पनीको आधिकारिक फेसबुक पेजका साथै अन्य सामाजिक संजालमा गरिएको पोष्टमा कम्तिमा आफ्ना १० जना साथीहरुलाई ट्याग वा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । मेन्सन गरिसकेपछी सहभागीले कम्पनीको तर्फबाट फेसबुक मेसेन्जरमा मार्फत एउटा कोड प्राप्त गर्नेहुनेछ र उक्त कोड कम्पनीको वेबसाईट https://www.rollingnexus.com/sports प्रयोग गरि सहभागीता जनाउन सकिने व्यवस्था भएको कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट रंजित थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहभागीहरुले प्रत्येक दिन कुन टिमले जित्छ ? पहिलो गोल कुन टिमको तर्फबाट हुन्छ ? कुन टिमले कति गोल हान्छ ? जस्ता कुरामा भबिस्यबाणी गर्न सकिन्छ ।
साथै सहभागीले गरेको खेल भविष्यवाणीको आधारमा प्रत्येक खेलका लागि निश्चित अंक दिने प्रावधान रहेको छ सोही अनसार अंक तालिका पनि कायम गरिने छ । अङ्क तालिकामा जुन सहभागी प्रतियोगीमा बढी अंक प्राप्त गर्नेछन उसैलाई विजेता घोषणा गरिने व्यवस्था गरिएको थापाले जानकारी दिए ।
हरेक दिन विजेता घोषणा गरिनेछ र विजेताले प्रत्येक खेलको भबिष्यबाणी गरि विजेता भएवापत कम्पनीको तर्फबाट नगद रु. १००० का साथै अन्य आकर्षक पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।
यस प्रकियाका आधारमा प्रत्येक दिनको प्रत्येक खेलको भबिष्यवाणी गरे बाफतको अङ्क पाउने छन् यसैलाई आधार मान्दै युरो कप २०२१ को फाइनल हुँदाको बखतसम्म कायम गरिने छ । यसरी अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको प्रतियोगीलाई विजेता घोषणा गरिनेछ । युरो कप २०२१ को सिजन विजेताले नगद रु. ३० हजार जित्ने अवसर पाउने छ भने दोश्रो विजेताले नगद रु. ५ हजारका साथै कम्पनी तर्फबाट अन्य आकर्षक पुरस्कार पाउने व्यवस्था रहेको थापाले बताउनु भयो । प्रत्येक खेलको भबिष्यबाणीमा सहभागीले प्राप्त गरेको अङ्क तालिका अनुसार कुनै सहभागीको अङ्क समान भएमा गोला प्रथाद्वारा विजेता घोषणा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।